AH: October 2012
သြော်.. ဘာလိုလိုနဲ့ အောက်တိုဘာလတောင် ကုန်ရောပေါ့။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က စင်ကျားပေါ ခဏ ပြန်သည်။ ဘာရယ်မဟုတ်… အလုပ်ထဲမှ လွတ်ရာကျွတ်ရာကို ပြေးခြင်းဖြစ်သည်။ အခွန်ကိစ္စတွေ ရှင်းသည်။ ကျန်တဲ့ရက်နားသည်။ နားတော့ ဘယ်မှ လျှောက်မသွားဖြစ်။ ချယ်ရီမြေတစ်ခေါက်ရောက်သည်။ ကျန်တဲ့ ရက်တွေကတော့ အိမ်မှာပဲ ကပ်နေဖြစ်သည်။ ကပ်နေဖြစ်ဆို အိမ်က သူငယ်ချင်းတွေက PS3 ၀ယ်ထားတော့ ဘောလုံး လှိမ့်ကန်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကန်သည့်ပွဲတိုင်းက ရှုံးသည်။ PS2 နှင့် အတော်ကွာသည်။
သွားရည်ကျနေသော ပန်းသီးရဲ့ ရက်တီးနား ရုပ်ထွက်နှင့် မက်ဘွတ်ကြီးကို သွားငမ်းသည်။ အို… ပါးပါးလေးပါလား…. ဟာ… ရုပ်ထွက်ကောင်းလိုက်တာ… လိုချင်လိုက်တာ… လိုချင်လိုက်တာ… ရှု့မငြီးက ပါမစ်ပိတ်ထားတော့ တံထွေးမြိုချပြီး ပြန်လာရသည်။ စိတ်ကတော့ မလျှော့ချင်…. တစ်ခုခုတော့ ၀ယ်ရမှဖြစ်မည်။ ဒီတော့ ပန်းသီးရဲ့ အသစ်ထွက်တဲ့ နားကျပ်တစ်ခုနဲ့ Airport Express သာဝယ်ပြီးပြန်လာသည်။ နားကျပ်က နားထဲထိုးထည့်လို့ကောင်းတာကလွဲပြီးတော့ ထူးထူးခြားခြားတော့ ဘာမှမဟုတ်။ ဒီအသံက ဒီအသံသာဖြစ်သည်။ Dr. Dre ကမှ ပိုကောင်းသေးသည်။ Airport Express နဲ့ဆိုရင်တော့ Wifi နဲ့ ဆောင်းဘောက်တွဲပြီး သီချင်းဖွင့်လို့ရမည်။ ဒီလိုနဲ့ ရှန်ဟိုင်းပြန်ဖို့ ချန်ဂီ လေဆိပ်ရောက်တော့ 32G iPod သွားတွေ့သည်။ Duty Free ဆိုတော့ ၃၇၀ လောက်ပဲပေးရသည်။ တန်သည်… ၀ယ်သည်။ ရှု့မငြီး က ဒါကို ၀ယ်မှန်းမသိချေ။ သို့ပေမယ့် နားကျပ်တစ်ခုကတော့ ပိုနေပြီ။
ဒီလိုနှင့် တရုတ်ပြန်ရောက်လာသည်။ မက်ဘွတ်ကြီးကတော့ လိုချင်တုန်း….။ အို.. ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ.. စိတ်ထိန်း စိတ်ထိန်း။ စိတ်ထိန်းလို့မရတော့ ခုသုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာကို OS X Mountain Lion ပုံစံအတုကို ဟောဒီကနေ 32bit အတွက်ရွေး၊ ဒေါင်းပြီးတော့ သွင်းပစ်လိုက်သည်။ ပေါ်လာတာလေးတွေက ဟို ရက်တီးနားရုပ်ထွက်ဟာကြီးနဲ့ ဆင်တင်တင်ဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နေသာထိုင်သာ အတော်ရှိသွားသည်။
Posted by AH at 10/31/2012 10:57:00 PM2comments
ပိုလန်နိုင် ၀ါဆောမြို့မှာတော့ ကမ္ဘာ့အကျဉ်းဆုံး အိမ်ကလေးကို တည်ဆောက်ပြီးသွားပါပြီ။ ဒီအိမ်ကလေးကတော့ တိုက်နှစ်လုံးကြားထဲမှာ ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ အခန်းရဲ့ ဘေးနှစ်ဖက် အကျယ်ဆုံးဟာ ၅ပေပဲ ရှိပါတယ်။ အိမ်လေးကိုတက်သွားရင် မြေညီထပ်မှာတော့ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ မီးဖိုချောင်နဲ့ ထမင်းစားခန်းတို့ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့၊ အပေါ်ထပ်မှာတော့ အိပ်ယာနဲ့ စားပွဲခုံလေးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူတစ်ယောက်နေထိုင်ဖို့အတွက် အနဲဆုံးသော လိုအပ်ချက်နဲ့ ပြည့်စုံအောင် ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဗိသုကာ ပညာရှင် Jakub Szczesny ကဆိုပါတယ်။
Posted by AH at 10/25/2012 11:59:00 AM7comments
ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့… ဒါတွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးက လည်ပတ်နေတာ။ လျှပ်စစ်မီး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နေ့စဉ် လူနေမှု့ဘ၀ ဒါတွေအားလုံးဟာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပေါ် အများကြီး မှီခိုနေတယ်။ ဒီလောင်စာစွမ်းအင် အရင်းအမြစ်ဆိုတာကလဲ ထပ်ပြီးတော့ အသစ်ဖြစ်ဖို့ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြာတဲ့ မြေအောက်က ဖိအားများစွာနဲ့ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်လာတဲ့ Fossil Fuel တွေ။ ဒါတွေကို တူးဖော်၊ ထုတ်လုပ်ပြီး လူသားတွေ အသုံးချနေကြတာ။ တစ်နေ့ကျရင် ဒီ Fossil Fuel တွေဟာ ဒီနှုန်းအတိုင်း ဆက်လက်ပြီးတော့ တူးဖော်နေရင် ကမ္ဘာမြေပေါ်ကနေ ပျောက်သွားမှာ။ ဒီတော့ ဘာလုပ်မလဲ? ကြက်ဆူဆီစိုက်မလား? ဒါမှ မဟုတ် အပေါ်က ဓာတ်ပုံထဲကလို စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာ ဒိုင်နိုဆော တွေ မွေး၊ မြေမြှုပ်၊ ပြီးတော့ နှစ်တွေကြာအောင်စောင့် ပြီးတော့ ရေနံတို့၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တို့ ဖြစ်လာတော့မှ ပြန်တူး။ ဒီနည်းလဲ သိပ်တော့ မဟန်လှဘူး။
အခု သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်မိတယ်။ အင်္ဂလန်က Air Fuel Synthesis ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုက လေထဲကနေ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန် လောင်စာကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါပြီတဲ့။ ထုတ်လုပ်တဲ့ concept ကတော့ အောက်ကပုံအတိုင်း လေထုထဲကနေ ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေကို ကာဘွန် Filter နဲ့စစ်၊ ရလာတဲ့ CO2 ကို ရေထဲကနေ Hydrogen Electrolyser ကနေခွဲထုတ်ပေးလိုက်လို့ ရလာမယ့် H2 နဲ့ပေါင်း၊ Fuel Reactor ထဲထည့် ဟော… ဟိုက်ဒရိုကာဘွန် လောင်စာ စွမ်းအင် အသစ်ရပါပြီတဲ့ဗျား။ ဒီတော့ သူ့မှာ သုံးတာက လေနဲ့ ရေပဲဆိုတော့ ထွေထွေထူးထူး ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ညစ်ငြမ်းမှု့တွေ၊ ပြုန်းတီးမှု့တွေ မရှိပဲ ကောင်းမွန်လှတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ လောင်စာ စွမ်းအင်ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသတဲ့။
Posted by AH at 10/24/2012 09:23:00 AM3comments
အရင်တုန်းက ခွေး ဆိုပြီးတော့ တင်ထားသေးတယ်။ ခုလဲ ခွေးပဲ… နဲနဲကွာတာကတော့ ကိုပါပီရဲ့ တစ်နေ့တာ ပုံစံမျိုးလေးကို ရိုက်ပြီး တင်ထားတာလေး။ သဘောကျလို့ ထပ်ပြီးတော့ ရှဲလိုက်ပါကြောင်း……
Posted by AH at 10/23/2012 10:43:00 PM3comments
Posted by AH at 10/17/2012 10:25:00 PM4comments
Posted by AH at 10/14/2012 11:35:00 PM2comments
Posted by AH at 10/11/2012 07:02:00 AM 8 comments
ယူကီ မက်ဆူဒ ရဲ့ သုံးဖက်မြင် ဒီဇိုင်းလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုံမှန် သမားရိုးကျ Art Work တွေကနေ ကွဲထွက်ပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာမို့ တစ်မျိုးလေး ထူးခြားနေပါတယ်။
Posted by AH at 10/10/2012 08:43:00 PM 1 comments
သဋ္ဌေးကြီးဟာ ဘာဖြစ်လို့ သတို့သားရှာပုံတော်ဖွင့်ရတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ….? ပြဿနာကတော့ သူ့သမီးလေးဟာ ပြားရာကလုံးလို့ ယောက်ျားလေးတွေကို စိတ်မ၀င်စား မိန်းကလေး အချင်းချင်းသာ စိတ်ဝင်စားလို့ ဖြစ်ပါသတဲ့။ လောလောဆယ်မှာ သူ့နဲ့ ချစ်သက်တမ်းကြာပြီဖြစ်တဲ့ အချစ်တော်လေးက ပြင်သစ်မှာ နေပါသတဲ့။ ကဲ….. သန်း ၆ သောင်းတန် သတို့သား ဖြစ်လိုသူများ ကံစမ်းနိုင်ကြပါပြီ။
Posted by AH at 10/07/2012 11:31:00 PM7comments
A revised MARPOL Annex V will enter into force on 1 January, 2013, and will introduce stricter controls on the disposal of garbage from ships at sea.
The main revisions to the Annex are as follows:
1. New definitions have been introduced, including for animal carcasses, cooking oil, cargo residue and domestic waste.
2. All ships of 100 gt and above or certified to carry more than 15 people are required to have on boardagarbage management plan (note: there is no requirement for the plan to be approved).
3. Ships 12 metres in length or more and fixed or floating platforms are to display placards notifying crew and passengers of the MARPOL Annex V requirements.
4. Ships of 400 gt and above and all fixed or floating platforms are to have on board and maintainagarbage record book in the format specified in MARPOL Annex V.
5. Discharges of any garbage from fixed or floating platforms and from any ship alongside or within 500 metres ofafixed or floating platform are prohibited. Food waste may be discharged fromafixed or floating platform provided it is more than 12 nm from land and the waste has been passed throughacomminuter or grinder so that it can pass throughascreen with openings no greater than 25 mm.
6. The discharge of garbage into the sea is prohibited except under certain circumstances whenaship is en route, as follows:
Food waste may be discharged more than3nautical miles (nm) from land if passed throughacomminuter or grinder, Such waste is to be capable of passing throughascreen no greater than 25 mm or may be discharged more than 12 nm from land if not passed throughacomminuter or grinder.
Cargo residues that do not contain substances classified as harmful to the marine environment may be discharged more than 12 nm from land.
Cleaning agents in cargo hold, deck and external surfaces’ wash water may be discharged to sea provided they are not harmful to the marine environment.
Animal carcasses may be discharged as far from land as possible in accordance with IMO guidelines.
Inside special areas
Food wastes may be discharged as far as practical from land but not less than 12 nm from land or the nearest ice shelf.
Cargo residues may be discharged provided that:
cleaning agents in cargo hold, deck and external surface wash water are not harmful to the marine environment
both the port of departure and the next port of destination are within the special area and the ship will not transit outside the special area between those ports
no adequate reception facilities are available at those ports
discharge of cargo hold washing water containing residues is made as far as practicable from the nearest land or ice shelf and not less than 12 nautical miles from the nearest land or the nearest ice shelf.
Cleaning agents in cargo hold, deck and external surface wash water may be discharged to sea provided they are not harmful to the marine environment.
Note: the IMO is developing guidelines for determining which cargo residues and cleaning agents are harmful to the marine environment.
Reference : Lloyd's Register Of Shipping
Posted by AH at 10/07/2012 08:45:00 PM0comments
Novel Coronavirus (SARS မျိုးနွယ်ဝင် ဗိုင်းရပ်(စ်) အသစ်)
SARS… တုန်းက လူတွေ အလူးအလဲ ခံခဲ့ရတာပဲ။ ခုလည်း လာပြန်ပြီ နောက်တစ်မျိုး Novel Coronavirus တဲ့။ WHO (World Health Organization) ရဲ့ အဆိုအရတော့ လောလောဆယ် ၂ ယောက်တွေ့ထားပါသတဲ့။ ခုထိတော့ အများကြီး ပြန့်သွားတယ် မကြားမိသေးပါဘူး။ SARS ရဲ့ virus အုပ်စုဝင် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ coronavirus မျိုးစိတ်ကို လောလောဆယ်တော့ Novel Coronavirus လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒီ ဗိုင်းရပ်ဝင်သွားရင် ရုတ်တရက် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ အပါအ၀င် ကျောက်ကပ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်မှု့စနစ်ကိုပါ ထိခိုက်စေပါသတဲ့။ ဆေးအကြောင်းလဲ နေသိပ်မကောင်းရင် ပါရာစီတမောတစ်လုံးသောက် စောင်ခြုံပြီးကွေး ဆိုတာလောက်ကလွဲလို့ ဘာမှ သိလှတယ်မဟုတ်၊ သြော်.. ဗိုင်းရပ်(စ်) ဆိုတော့လဲ ဗိုင်းရပ်(စ်)ပေါ့လေ။ ဟိုလို ဒီလို ကာကွယ်ပါဆိုတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်ဝေတော့လဲ အဲ့ဒီအတိုင်း လိုက်လုပ်ယုံပေါ့။ ဘယ့်နှယ် တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင် အသစ် အသစ်တွေ ထွက်ပဲ ထွက်နိုင်လွန်းတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများကတော့ ဟော့ဒီ အစီရင်ခံစာမှာ အသေးစိတ် ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖတ်လဲ နားမလည်။
ဒီဗိုင်းရပ်(စ်)က အရှေ့အလည်ပိုင်း(ဆော်ဒီ နဲ့ ကာတာ) ကနေ စပြီးတော့ ပြန့်တယ်လို့ ယူဆပါသတဲ့။ ဒီနေ့တော့ အလုပ်ထဲကို မသွားပဲ တစ်ရက်နားပစ်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ ပိုစ့်အသစ်လေးတွေ ရေးဖြစ်တယ်။ အရင်ရက်တွေတုန်းက ပိုစ့်မှန်မှန် မတင်ဖြစ်တဲ့အတွက် စာလာဖတ်သူများကို အထူးပဲ အားနာမိပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကတော့ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ယိုယွင်းလာတာပါပဲလေ။ အရေးကြီးတာက ခြေအိတ်တွေ လျှော်ရဦးမယ်။ ပိတ်ရက်လေးရတုန်း။
Reference : (WHO – Global Alert and Response)
Posted by AH at 10/01/2012 04:20:00 PM4comments
Posted by AH at 10/01/2012 10:44:00 AM5comments